မပေးလုံးဝလက်တော့ (ကွန်ပျူတာ) ကိုချွတ် - ဘလူးတုသ် - 2019
အတော်လေးမကြာခဏ Laptop ကိုအသုံးပြုသူများက (ဒီထက်ကို PC) အခြားပြဿနာကြုံတွေ့ရလျက်ရှိသည်: သင် device ကိုကို turn off တဲ့အခါမှာ - (ဆိုလိုသည်မှာ (က operate ဆက်လက်ဖြစ်စေကိုတုံ့ပြန်သို့မဟုတ်ဥပမာ, မျက်နှာပြင်ပိတ်, နှင့်မှတ်စုစာအုပ်အပေါ် run နေပါဘူးသင်ကအလုပ်လုပ် coolers နားမထောင်ခြင်းနှင့်တွေ့နိုင်ပါသည် device ကိုအပေါ်ပူအယ်လ်အီးဒီ)) ။
ဤသည်ကိုငါအသုံးအများဆုံးအချို့ထွက်စေချင်ဒီဆောင်းပါးမှာပါဖြစ်ကြောင်းကိုအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ဒါ ...
အဆိုပါလက်တော့ကို turn off ဖို့ - ပဲ 5-10 စက္ကန့်ဘို့ပါဝါခလုတ်ကိုနှိမ့်ချကိုင်ထားပါ။ ငါအချိန်ကြာမြင့်စွာများအတွက် Semi-ချွတ်အတွက် Laptop ကိုစွန့်ခွာဘူး။
1) ခလုတ်ကိုစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ off setting
အများစုမှာအသုံးပြုသူများကီးဘုတ်မှဘေးကပြား၏ရှေ့အပေါ်ပါဝါ key ကိုသုံးပြီးလက်ပ်တော့ကို turn off ပါလိမ့်မယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ကမကြာခဏ Laptop ကိုပိတ်ပစ်ရန်နှင့်အိပ်စက်ခြင်းကလွှဲပြောင်းဖို့မဆုံးဖြတ်သည်။ သငျသညျမြားကိုလညျးခလုတ်ကိုမှတဆင့် disable ဖို့အသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင် - ငါစစျဆေးဖို့ပထမဦးဆုံးအရာအကြံပြု: အဘယျသို့ setting များကိုတွေနဲ့ parameters ဒီ button ကိုမဘို့ရာခန့်ရှိပါသည်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့ Control Panel ထဲက ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အသံ ပါဝါမှာ Windows က Control Panel ထဲက (က Windows 7, 8, 10 သက်ဆိုင်ရာ) ကိုသွား
သင်္ဘောသဖန်း။ 1. ပါဝါခလုတ်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
သင်လက်ပ်တော့ချင်တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်အခါပါဝါခလုတ်ကိုပိတ်ထားခဲ့သည် - (ပုံ2ကိုကြည့်ပါ .. ) သင့်လျော်သော setting ကိုရွေးပါ။
သင်္ဘောသဖန်း။ ဆိုလိုသည်ကားကွန်ပျူတာကို turn off - 2. "Down Shut" ကိုချိန်ညှိခြင်း။
2) Disabled စာတန်းထိုး
ငါ Laptop ကိုပိတ်ထားသည်မဟုတ်မယ်ဆိုရင်လုပ်ဖို့အကြံပြုမယ်လို့ဒုတိယအရာ - အမြန်ပစ်လွှတ် disable လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးရဲ့ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအတွက်ကဲ့သို့တူညီသောအပိုင်း၌တူညီသောအာဏာကို setting တွင်ပြု - "။ ပါဝါ Button ကိုချိန်ညှိခြင်း" သင်္ဘောသဖန်း။2(ကိုယ့်အထက်), လမ်းဖြင့်, သင်က link "လက်ရှိတွင်မရနိုင်ပါဖြစ်ကြောင်း setting များကိုပြောင်းလဲပါ" တွေ့နိုင်ပါသည် - ဒီမှာသည်နှင့်သင်နှိပ်ရှိသည်!
ထို့နောက်သင် "အစာရှောင်ခြင်း startup (အကြံပြုထားသည်) တွင်ဖွင့်" နှင့် settings ကိုကယ်ဖို့လာမယ့်ကို tick ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ဒီ option ကို Windows 7, 8 (ASUS ကနှင့် Dell မှာအတွေ့အကြုံရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး) အပြေးသည့်ယာဉ်မောင်းလက်ပ်တော့အချို့နှင့်အတူပဋိပက္ခများတွင်မကြာခဏပင်ဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကို။ စကားမစပ်, ဤကိစ္စတွင်အတွက်, တခါတရံတွင်သူကတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်း (ဥပမာ, Windows 8 ကို Windows7ကိုဖြင့်အစားထိုးနေသည်) နှင့်အသစ်သော OS ကိုအခြားယာဉ်မောင်းများတပ်ဆင်ရန်အတွက် Windows အစားထိုးနိုင်ရန်ကူညီပေးသည်။
သင်္ဘောသဖန်း။ 3. Quick Launch ကို Disable
3) က USB ပါဝါ setting များကိုပြောင်းလဲခြင်း
ဒါဟာအစက USB port များစစ်ဆင်ရေးမလျော်ကန်သောပိတ် (အဖြစ်အိပ်စက်ခြင်းနှင့် hibernation mode ကို) ၏တစ်ဦးအလွန်ဘုံအကြောင်းမရှိဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်အကြံပေးချက်များအဘယ်သူမျှမရလဒ်များလျှင်ထိုအကြောင်းကြောင့်, ငါသည် (ဒီ Laptop ကိုဘက်ထရီ 3-6% ပျမ်းမျှ၏အလုပ်ချိန်များ၏အရေအတွက်ကိုလျှော့ချမည်) USB မှတ်စစ်ဆင်ရေးအတွက်စွမ်းအင်ချွေတာကို disable လုပ်ဖို့ကြိုးစားရန်အကြံပြုပါသည်။
Control Panel ကို ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အသံ Device Manager (ပုံ4ကိုကြည့်ပါ .. ): ဒီ option ကို disable လုပ်ဖို့, သင် Device Manager ဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။
သင်္ဘောသဖန်း။ 4. စတင်ခြင်း device ကိုမန်နေဂျာ
နောက်ထပ်က, Device Manager ထဲတွင်သင် tab ကို "ကို USB နဲ့ controller" ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဖြစ်လျှင်ဤစာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံးကို USB device ကို၏ဂုဏ်သတ္တိများဖွင့်ရန်လိုအပ် (ငါ၏အမှု၌ကား, Generic ကို USB ၏ပထမဦးဆုံး tab ကို, ကြည့်ရှုပါ။ ပုံ 5) ။
သင်္ဘောသဖန်း။ USB မှတ်နဲ့ controller ၏ 5. Properties ကို
"တန်ခိုးကယ်ဖို့ကဒီကိရိယာကို turn off မှ Enable" ကိုအဆိုပါ device ကိုဂုဏ်သတ္တိများ tab ကို "ပါဝါစီမံခန့်ခွဲမှု" နှင့် Uncheck လာမယ့် (ကိုကြည့်ပါ။ ပုံ။ 6) ။
သင်္ဘောသဖန်း။ 6. စွမ်းအင်ချွေတာဘို့ device ကို disable လုပ်ဖို့ Allow
ထို့နောက် (ထို "ကို USB control" tab မှာအားလုံးကို USB devices တွေကို uncheck အလားတူ) အ settings ကိုကယ်တင်ပြီး USB tab ကို "ကို USB Controllers" တွင်ဒုတိယကိရိယာဆက်လက်ဆောင်ရွက်။
ထို့နောက်လက်ပ်တော့ကို turn off ကြိုးစားပါ။ ထိုပြဿနာကို USB နဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်ဆိုပါက - အဲဒါကိုသင့်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ဖို့စတင်သည်။
4) Disable လုပ်ထား Hibernation ဆိုတာ
ကျန်ရှိနေသေးသောအကြံပြုချက်များလျော်သောရလဒ်မပေးခဲ့ပါဘူးရှိရာကိစ္စများတွင်, သင် (- အိပ်စက်ခြင်းကအခြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်မှတပါးများစွာသောအသုံးပြုသူများအပင်, ကမသုံးပါ) လုံးဝ hibernation disable သငျ့သညျ။
powercfg / ဇပယ်: ထို့အပွငျအရေးပါသောအချက်, hibernation စာရိုက်အာဏာအောက်မှာနှင့် (စီမံခန့်ခွဲသူအခွင့်အရေးများနှင့်အတူ) က command line မှတဆင့်, ကို Windows Control Panel ထဲကမလိုအပ်ပါဘူး disable
Windows 8.1 ကို, 10 ခုနှစ်, ရိုးရိုး, မှာ "Start ကို" menu ပေါ်တွင် mouse ကို click နှိပ်ပြီးညာဘက်ကိုနှိပ်ပြီး select လုပ်ပါ "Command Prompt ကို (အဒ်မင်) ။ " Windows 7, က command line ကအတွက်သင့်လျော်တဲ့အပိုင်းနေရာချထားခြင်း, "Start ကို" menu ကနေစတင်နိုင်ပါတယ်။
သင်္ဘောသဖန်း။ 7. Windows 8.1 ကို - စီမံခန့်ခွဲသူအခွင့်အရေးများနဲ့ command prompt ကိုဖွင့်လိုက်ပါ
ထို့နောက် ဆက်လက်. အမျိုးအစား powercfg / ဇချွတ်, နှင့် (ကြည့်ပါ။ ပုံ။ 8) ENTER ကိုနှိပ်ပါ။
သင်္ဘောသဖန်း။ 8. Disable လုပ်ထား hibernation
မကြာခဏဆိုသလိုရိုးရှင်းတဲ့အစွန်အဖျားပုံမှန်လည်ပတ်ဖို့ Laptop ကိုပြန်သွားဖို့ကူညီပေးသည်!
5) အချို့သောအစီအစဉ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုချွတ် Block
တချို့ကန်ဆောင်မှုများနှင့်အစီအစဉ်များကွန်ပျူတာကိုပိတ်ထားပိတ်ဆို့နိုင်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာပေမယ့်နှင့် 20 စက္ကန့်အတွင်းအားလုံးန်ဆောင်မှုများနှင့်အစီအစဉ်များကိုပိတ်ပါ။ - အမှားကအမြဲမအခမဲ့ ...
အမြဲမလွယ်ကူပါဘူး - ကိုရှငျးရှငျးလငျးလငျးကြောင်းလုပ်ကွက်စနစ်အတိအကျဖြစ်စဉ်ကိုသတ်မှတ်။ သင်တို့အပေါ်မှာ / ချွတ် switching နှင့်အတူမည်သည့်ပြဿနာမျှခဲ့ကြပြီမဟုတ်, နှင့်ပြဿနာအချို့အစီအစဉ်များ၏ installation ပြီးနောက်ရှိခဲ့ပါလျှင် - ထို့ပြင်အဆိုပါပြစ်မှုကျူးလွန်သူမဟုတ်ဘဲရိုးရှင်းတဲ့🙂၏အဓိပ္ပါယ်, မကြာခဏကို Windows, ပယ် switching မီ, ထိုကဲ့သို့သောနှင့်ထိုကဲ့သို့သော program တစ်ခုပါသေးကြောင်းကိုကြေညာ ဒါဟာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်သင်ကဖြည့်စွက်ချင်တယ်သေချာဟုတ်မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်နိုင်သည်အဘယ်မှာရှိကိစ္စများတွင်ချွတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းဘာအစီအစဉ်ကိုသင်မဂ္ဂဇင်းမှာကြည့်ဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါ။ Control Panel ကို System ကိုနှင့်လုံခြုံရေး လှုပ်ရှားမှု Center က ယုံကြည်စိတ်ချရသောစောင့်ကြည့်: - Windows 7, 8, 10 ခုနှစ်တွင်ကြောင့်အောက်ပါလိပ်စာတွင်တည်ရှိပြီး
တိကျတဲ့ရက်စွဲကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်, သင်သည်အရေးကြီးတဲ့ system မက်ဆေ့ခ်ျများရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အကယ်စင်စစ်ဤစာရင်းတွင်အတွက် PC ကိုချွတ်ပိတ်ဆို့ခြင်း, သင့်အစီအစဉ်ကိုရလိမ့်မည်။
သင်္ဘောသဖန်း။ 9. ယုံကြည်စိတ်ချရသောစောင့်ကြည့်
1) လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာငါ Auto-အဆင့်မြှင့်ဘို့ (ထိုယာဉ်မောင်းမှယာဉ်မောင်း software ကိုအာရုံစိုက်ဖို့အကြံပြု:
အလွန်မကြာခဏပြုလုပ် add တစ်ပဋိပက္ခကြောင့်ဖြစ်ပြီးထိုပြဿနာကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ laptop ကို Windows7နဲ့ဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်တယ်, ပြီးတော့ Windows 10 ကိုကကို update - နှင့်ပြဿနာများစတင်: ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအကြိမ်ပေါင်းများစွာအခြားပြဿနာနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ဤအမှုကိစ္စ၌ကျောအဟောင်း OS နဲ့အဟောင်းများယာဉ်မောင်း (- ကအဟောင်းများထဲမှထက် သာ. ကောင်း၏အမြဲအရာအားလုံးအသစ်ဖြစ်၏မဟုတ်) မှလှိမ့်ရန်ကူညီပေးသည်။
2) ပြဿနာအချို့ကိစ္စများတွင်ပါက BIOS ကို update လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်စေခြင်းငှါ (ဒီအပေါ်ကိုပိုမိုများအတွက်: - အန္တရာယ်ထုတ်လုပ်သူရဲ့အာမခံဆုံးရှုံးစကားမစပ်, တစ်ခါတစ်ရံထုတ်လုပ်သူသူတို့ကိုယ်သူတို့အကြံပြုမဟုတ်အသစ်ကလက်ပ်တော့များတွင် (ထိုကဲ့သို့သောအမှားများကိုကျွမ်းကျင်ပြီသော updates မှာရေးလိုက်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် update လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်) ။
3) တဦးတည်းက Dell Laptop ကိုမှာအလားတူရုပ်ပုံလေ့လာတွေ့ရှိ: ပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးနောက်မျက်နှာပြင်ပိတ်နှင့် Laptop ကိုသူ့ဟာသူအလုပ်လုပ်ဆက်ပြောသည်။ ရှည်လျားသောရှာဖွေရေးပြီးနောက်ကြောင့်မြေတပြင်လုံးကိစ္စ CD / DVD ကို drive ကိုခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ သူ၏ခရီးစဉ်ပြီးနောက် - Laptop ကိုပုံမှန်အလုပ်မလုပ်လာတယ်။
4) ဒါ့အပြင်အချို့မော်ဒယ်ပေါ် Acer နဲ့ Asus ကကြောင့် Bluetooth ကို module တစ်ခုအလားတူပြဿနာရင်ဆိုင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သူတို့ကိုငါအများအပြားပင်မသုံးကြဘူးထင် - ဒါကြောင့်ငါလုံးဝကကို turn off နှင့် Laptop ကိုအလုပ်စစျဆေးဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်။
5) နောက်ဆုံး ... သင်ကကွဲပြားခြားနားအသုံးပြုနေသည်ဆိုပါက Windows ကိုတည်ဆောက် - သင်လိုင်စင်ကို install လုပ်ဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါ။ အလွန်မကြာခဏ "စုဆောင်း" :) ပြု ...